पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराई सहभागी ‘जूम मिटिङ’मा एक मिनेटसम्म अ’श्‍लील भिडियो प्ले ! — Imandarmedia.com
पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराई सहभागी ‘जूम मिटिङ’मा एक मिनेटसम्म अ’श्‍लील भिडियो प्ले !
काठमाडौँ । पर्यटन उद्योगलाई कोरोना भाइरसको महामारीबाट उकास्न पर्यटन बोर्डले सोमबार ल्याएको पर्यटन क्षेत्र सञ्चालनसम्बन्धी मापदण्ड ‘कोभिड–१९ अपरेसनल गाइडलाइन विथ हेल्थ प्रोटोकल फर टुरिजम सेक्टर’ सार्वजनिक कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि थिए, पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराई । जुम एपमा भर्चुअल मिटिङ भइरहेको थियो । त्यहाँ सहभागी थिए २ सय ५९ जना ।
मन्त्री भट्टराई बोल्दै थिए । करिब ५ मिनेटपछि एकाएक जूमको स्क्रिनमा अ’श्लील भिडियो देखियो । यो क्रम करिब १ मिनेट चल्यो । जूम बैठकमा मन्त्रीलाई उत्साहका साथ सुनिरहेका देशभरका पर्यटन व्यवसायी, पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित संघ संगठनका पदाधिकारी अ’श्लील भिडियोका दर्शक बन्न पुगे । मन्त्रीबाहेक अरुको माइक्रोफोन म्युट गरिएकाले दर्शकहरुले विरोध गरेको आवाज सुनिएन । तर त्यही जूममा रहेका च्याटमा सहभागीहरुले तत्काल निन्दा गर्दै आपत्ति जनाए । तत्काल बन्द गर्न भने ।
यो कसरी भयो । किन भयो । कसैले भन्न सकेनन् । लगत्तै बोर्डबाट वरिष्ठ निर्देशक थापा बोर्डका तर्फबाट मन्त्रालय पुगिन् । उनले पर्यटन मन्त्री भट्टराई, सचिव र अन्य अधिकारीलाई भेटिन् । मन्त्रालयका अनुसार घटनाबारे छानबिन गर्न एउटा समिति गठन गरिएको छ । बोर्डले पनि यो घटनाको छानबिन गर्न साइबर अपराध हेर्ने नेपाल प्रहरीको सेलमा जाहेरी दिने जनाएको छ ।